Soo ogow xeebaha ugu quruxda badan Huelva | Wararka Safarka
Xeebaha quruxda badan ee Huelva
Susana Garcia | | General, Huelva, Xeebaha
La Gobolka Huelva wuxuu na siiyaa kiiloomitir iyo kilomitir xeeb leh xeebo qurux badan oo lagu raaxeysto cimiladeeda wanaagsan, maadaama ay tahay gobol ku yaal qeybta koonfureed ee Spain xadka uu la wadaago Portugal. Maanta dalxiisku waa mid ka mid ah waxqabadyadeeda ugu faa'iidada badan, maaddaama xeebtaas caanka ah ay leedahay waxyaabo badan oo soo jiidasho leh oo loogu talagalay kuwa yimaada Huelva, sidaa darteed waxaan dib u eegeynaa kuwaa oo ah xeebaha quruxda badan ee Huelva.
Waxaa jira dad badan xeebaha Huelva sidaa darteed dooro kan ugu quruxda badan waxay noqon kartaa xoogaa khiyaano ah. Xaqiiqdii waxaa jira fikrado dhamaan dhadhanka iyo qaar ka caansan kuwa kale laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan fikrad ka dhiibano xeebaha aan haboonayn inaan seegno haddii aan safar ku marayno Huelva.
1 Xeebta Islantilla
3 Xeebta Matalascañas
4 Xeebta El Rompido
5 Xeebta Torre del Loro
6 Xeebta Punta Umbría
Xeebtaan waa mid caan ah, maadaama ay ku taal oo kuyaala inta udhaxeysa magaalooyinka Isla Cristina iyo Lepe. Waa dherer ka badan kiiloomitir waxayna leedahay meelo badan. Waa wax caadi ah in qoysas lagu arko xeebtaan maadaama ay ka mid tahay kuwa leh dhammaan noocyada adeeg ee la heli karo, taas oo wax ka fududeynaysa haddii aad carruurta raacdo. Laakiin sidoo kale waxay leedahay meelo xasilloon. Xeebtaan sidoo kale waxaa ku yaal kayn geed qurux badan haddii aan ku daalno qorrax-qoynta iyo qaar ka mid ah buundooyinka oo noqon kara meel wanaagsan oo lagu nasto. Markuu hirku baxo, waxaa jira dhul ballaaran oo xeeb ah oo aad ku dhex mari karto taas oo si weyn loogu taliyay maaddaama sidan aan ku arki karno meelaha u dhow sida Playa del Hoyo. Kani waa mid kamid ah xeebaha ugu caansan oo waliba leh calan buluug ah sanad walba tayada biyaha iyo adeegyadeeda.
Kani waa mid kale oo ka mid ah xeebaha hubaal inay kugula talin doonaan haddii aad tagto Huelva. The Xeebta El Portil waa la magaaleeyay in kastoo ay hadda ku taal aagga keyd dabiiciga ah. Xeebtaan waa mid aad u qurux badan, oo dhererkeedu ka badan yahay saddex kiilomitir, sidaa darteed ma lahaan doonno dareemidda inay dad nagu hareereysan yihiin haddii aan raadino meelo ka baxsan oo ka baxsan meelaha magaalooyinka. Waa xeeb kale oo calan buluug ah leh oo bixisa noocyo adeegyo kala duwan ah. Sidoo kale aaggan waxaad ka arki kartaa Flecha del Rompido.
Xeebtaan runtii waa caan maxaa yeelay waxay ka dheer tahay shan kiilomitir waxayna ka dhigan tahay marin-u-helka lug si loo gaaro Beerta Qaranka ee Doñana, oo ah keydkeeda dabiiciga ugu muhiimsan. Waxay bixisaa biyo cadcad iyo adeegyo cadcad, laakiin sidoo kale waa mid aad u camiran xagaaga maxaa yeelay waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna dhow Seville, taas oo ka dhigaysa inaysan ahayn xulashada ugu fiican haddii aan raadineyno asturnaan. Laakiin dabcan waa xeeb ay tahay in la booqdo maxaa yeelay waxaan sidoo kale heli karnaa keydka dabiiciga. Aaggan waxaan sidoo kale ka arki karnaa Torre de la Higuera, oo ah dhisme qarnigii XNUMXaad oo burburay markii uu dhacay dhulgariirkii Lisbon. Tani sidoo kale waa xeeb ay yimaadaan taageerayaasha cayaaraha biyaha sida dabeylaha.
Xeebta El Rompido
Kani waa mid kale oo ka mid ah xeebaha aad jeclaan doontid, oo leh ciid wanaagsan oo dahab ah oo ku yaal Marismas del Río Piedras Park Dabiiciga ah. Doomaha ayaad ku raaci kartaa candhuuftii candhuufta ee laga arki lahaa xeebta, loona yaqaan Flecha del Rompido. Waa xeeb aad u xasilloon oo aan wax adeeg ah lahayn laakiin aad uga raaxeysan karto dabeecadda si ka badan. Meel u dhow waa tuulada kalluumeysiga ee Cartaya, oo ah meel qurux badan oo leh guryo cad.
Xeebta Torre del Loro
Xeebtani waa mid kale oo ka mid ah kuwa aan kuu ogolaanaya inaad ku raaxeysato meelaha iyada oo aan magaalooyin badan la dhisin, keligaa leh dabeecadda. Xeebtaan waxay leedahay marin wanaagsan iyo dhigasho, in kastoo ay tahay inaad ka lugeyso meeshan una aado xeebta, sidaa darteed badanaa laguma taliyo qoysaska ama dadka dhaqdhaqaaqoodu yaraaday. Waa xeeb weyn oo ka kooban afar kiiloomitir oo leh ciida caadiga ah ee dahabiga ah ee aagga halkaan oo aan sidoo kale ka heli doonno waardiye duug ah oo qarnigii XNUMXaad jiray taas oo ah waxa xeebta u bixiya magaceeda Munaaraddan waxaa iska leh Palos de la Frontera, Moguer, Almonte iyo Lucena del Puerto.
Xeebta Punta Umbría
Tani waxay noqon doontaa xeeb kale oo mashquul badan xilliga xagaaga maadaama ay tahay xeeb magaalo ku taal Punta Umbría. Waxay ku taalaa agteeda Deegaanka dabiiciga ah ee Marismas de Odiel markaa qiimo weyn ayey leedahay. Waa xeeb bixisa adeegyo oo dhan waana taas sababta ay badanaa ugu jeceshahay kuwa ku sii nagaada aaggan, sidoo kale leh calanka buluugga ah ee wax kasta oo ay u fidiso martida. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xeebo kale oo dhow oo dhow sida La Canaleta. Xeebta u dhow Enebrales waxaad sidoo kale ku tababaran kartaa qaawanaanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Xeebaha quruxda badan ee Huelva
Porto iyo xeebaheeda quruxda badan